ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: တပ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်ပစ်ရန် စစ်ဦးစီးချုပ် ပြောဆို
တပ်နှင့်ဆက်နွယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ ရပ်တန့်ပစ်ရန် စစ်ဦးစီးချုပ် ပြောဆို
Mekong News တာချီလိတ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃
စစ်တပ်ကပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၃လအတွင်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြဖို့ ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ် အပီရတ်ကောင်ဆွန်ပွန်က ပြောဆိုလိုက်သည်။
စနေနေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်တပ်မှ အရာခံဗိုလ်တစ်ဦးက လူအမြောက်အများကို ပစ်သတ်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွား ဆက်နွယ်သည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို အခြေခံပြီး စတင်ခဲ့သည့် အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၃၀ဦးသေဆုံးပြီး ၅၈ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
“လာမယ့် ၃လအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ကနေ ဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အထိ အားလုံး ပြင်ပမှာ စီးပွားရေးလုပ်နေတာတွေ လုံးဝကို မရှိစေရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာတွေက အမှားဖြစ်စေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်သိလို့ပါ” ဟု ထိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်က ပြောသည်။
စစ်တပ်အရာရှိများကို တပ်မှချထားပေးသည့် အိမ်ရာများတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ အခမဲ့ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားသည့်အတွက် ၎င်းတို့အနေဖြင့် အငြိမ်းစားယူသည့်အခါ အိမ်ရာဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေကြေးစုဆောင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အပီရတ်ကပြောသည်။
အငြိမ်းစားယူသွားသည့် စစ်တပ်အရာရှိများအနေဖြင့်လည်း နောက်အရာရှိများ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်ရန် ၎င်းတို့ကို ပေးထားသည့် အိမ်ရာများကို စွန့်လွှတ်ဖို့ တိုက်တွန်းသည်။
“စစ်တပ်အကြီးအကဲအနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ နောက်ဆုံးရက်အထိ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်သွားပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်နေရာကို နောက်ရောက်လာမယ့် အရာရှိကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု၎င်းက ပြောသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ကလည်း တပ်မတော်သားများကို ရောင်းချရန် အိမ်ရာတည်ဆောက်ဖို့အတွက် မြေနေရာ ခန့်ခွဲမှုစုံစမ်းရေး အရာရှိများ သီးခြားခန့်ထားလိုက်သည်။
“ဒါ တကယ့်သင်ခန်းစာကြီးပါပဲ။ အနာဂတ်မှာ ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေ မဖြစ်စေဖို့ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက တိုးတက်မြှင့်တင်မှုတွေလုပ်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်နဲ့ လူမှုကွန်ယက်က သက်ဆင်းလာမယ့် အပြုအမှုတွေအတွက်ပေါ့” ဟု၎င်းက ပြောသည်။
တပျနှငျ့ဆကျနှယျသညျ့ စီးပှားရေးလုပျဆောငျမှုမြား ရပျတနျ့ပဈရနျ စဈဦးစီးခြုပျပွောဆို
Mekong News တာခြီလိတျ၊ ဖဖေျောဝါရီ ၁၃
စဈတပျကပုဂ်ဂိုလျမြားအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးမြားကို ၃လအတှငျး ပွနျလညျရုပျသိမျးကွဖို့ ထိုငျးစဈဦးစီးခြုပျ အပီရတျကောငျဆှနျပှနျက ပွောဆိုလိုကျသညျ။
စနနေကေ့ ဖွဈပှားခဲ့သညျ့ စဈတပျမှ အရာခံဗိုလျတဈဦးက လူအမွောကျအမြားကို ပဈသတျခဲ့မှုနှငျ့ ပတျသကျပွီး ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောဆိုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
ပုဂ်ဂလိကအကြိုးစီးပှား ဆကျနှယျသညျ့ ကိစ်စရပျတဈခုကို အခွခေံပွီး စတငျခဲ့သညျ့ အဆိုပါ ပဈခတျမှုကွောငျ့ လူ ၃၀ဦးသဆေုံးပွီး ၅၈ဦး ဒဏျရာရခဲ့သညျ။
သဆေုံးဒဏျရာရသူမြား၏ ဆှမြေိုးသားခငျြးမြားကို စဈဦးစီးခြုပျက တောငျးပနျလိုကျပွီး ငှကွေေးထောကျပံ့မှုမြား ပွုလုပျသှားမညျဖွဈသလို ၎င်းငျးတို့၏ မြိုးဆကျမြားကိုလညျး စဈတပျအတှငျး အလုပျနရောမြား ဖနျတီးပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ကတိပွုပွောဆိုလိုကျသညျ။
စဈတပျမှ ရှေးခယျြခံရသူအခြို့ကို ဈေးသကျသကျသာသာဖွငျ့ အိမျရာဝယျယူခှငျ့အပါအဝငျ စီးပှားရေးနယျပယျ အသီးသီးတှငျ စဈတပျက ကာလကွာရှညျပါဝငျပတျသကျနမှေုကို စဈဦးစီးခြုပျက ဝနျခံခဲ့ပွီး ထိုသို့ပါဝငျနမှေုမြား ယခုအခါရပျသငျ့ပွီဟု သူက ဆိုသညျ။
“လာမယျ့ ၃လအတှငျး ဗိုလျခြုပျအဆငျ့ကနေ ဗိုလျမှူးကွီးအဆငျ့အထိ အားလုံး ပွငျပမှာ စီးပှားရေးလုပျနတောတှေ လုံးဝကို မရှိစရေတော့ပါဘူး။ ကြှနျတျော ဂရုမစိုကျပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာတှကေ အမှားဖွဈစလေဲဆိုတာ ကြှနျတျောသိလို့ပါ” ဟု ထိုငျးစဈဦးစီးခြုပျက ပွောသညျ။
စဈတပျအရာရှိမြားကို တပျမှခထြားပေးသညျ့ အိမျရာမြားတှငျ ဆယျစုနှဈမြားစှာကွာ အခမဲ့ နထေိုငျခှငျ့ပေးထားသညျ့အတှကျ ၎င်းငျးတို့အနဖွေငျ့ အငွိမျးစားယူသညျ့အခါ အိမျရာဝယျယူရနျအတှကျ ငှကွေေးစုဆောငျးနိုငျမညျ ဖွဈကွောငျး အပီရတျကပွောသညျ။
အငွိမျးစားယူသှားသညျ့ စဈတပျအရာရှိမြားအနဖွေငျ့လညျး နောကျအရာရှိမြား ဆကျလကျနထေိုငျနိုငျရနျ ၎င်းငျးတို့ကို ပေးထားသညျ့ အိမျရာမြားကို စှနျ့လှတျဖို့ တိုကျတှနျးသညျ။
“စဈတပျအကွီးအကဲအနနေဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျတဲ့ နောကျဆုံးရကျအထိ တိုးတကျပွောငျးလဲမှုတှေ ဆကျတိုကျလုပျဆောငျသှားပါ့မယျ။ ကြှနျတေျာ့နရောကို နောကျရောကျလာမယျ့ အရာရှိကလညျး ဒီအတိုငျးပဲ ဆကျလုပျလိမျ့မယျလို့ ယုံကွညျပါတယျ” ဟု၎င်းငျးက ပွောသညျ။
ဝနျကွီးခြုပျ ပရာယှတျကလညျး တပျမတျောသားမြားကို ရောငျးခရြနျ အိမျရာတညျဆောကျဖို့အတှကျ မွနေရော ခနျ့ခှဲမှုစုံစမျးရေး အရာရှိမြား သီးခွားခနျ့ထားလိုကျသညျ။
“ဒါ တကယျ့သငျခနျးစာကွီးပါပဲ။ အနာဂတျမှာ ဒီလိုအဖွဈအပကျြတှေ မဖွဈစဖေို့ အဖှဲ့အစညျးတိုငျးက တိုးတကျမွှငျ့တငျမှုတှလေုပျရမယျ။ အထူးသဖွငျ့ အငျတာနကျဝကျဘျဆိုဒျနဲ့ လူမှုကှနျယကျက သကျဆငျးလာမယျ့ အပွုအမှုတှအေတှကျပေါ့” ဟု၎င်းငျးက ပွောသညျ။
Ref: The Nation Bangkok
More than 160k men and women are usingasimple and secret "liquids hack" to burn2lbs each and every night in their sleep.
Did you hear there isa12 word phrase you can communicate to your partner... that will induce deep emotions of love and impulsive attraction for you deep inside his heart?
Because hidden in these 12 words isa"secret signal" that triggersaman's instinct to love, adore and look after you with all his heart...
This instinct is so built-in toaman's genetics that it will drive him to work harder than before to do his best at looking after your relationship.
In fact, triggering this powerful instinct is absolutely important to having the best possible relationship with your man that as soon as you send your mana"Secret Signal"...
...You'll instantly find him open his mind and heart to you in suchaway he's never experienced before and he will identify you as the only woman in the universe who has ever truly fascinated him.